“Bartomeu Wuxuu Ii Sheegay In Aanu Haysanin Lacag Uu Ku Iibsado Memphis Depay” – Laacibnet.net
“Bartomeu Wuxuu Ii Sheegay In Aanu Haysanin Lacag Uu Ku Iibsado Memphis Depay”
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa raadinaysa weeraryahan cusub oo xili ciyaareedkan ay ku dagaal-galaan, kaas oo buuxin kara booska weerarka tooska ah iyo midka garabkaba, isla markaana ka caawiya inay dib usoo ceshadaan horyaalka LaLiga ee Real Madrid ay kaga guuleysatay xili ciyaareedkii hore.
Barcelona oo la sheegayo inuu ka tegayo Luis Suarez oo ay Juventus doonayso, ayaa waxa ku habsaday dhaqaale xumo ka dhalatay xanuunka Korona Fayraska ee sida xun u aafeeyey dunida, sababna u noqday in kooxdu ay ciyaartoyda ka codsato inay mushahar dhimis 70% sameeyaan.
Tababaraha cusub ee Barcelona, Ronald Koeman ayaa doonaya inuu dibu-habayn ku sameeyo safka kooxdiisa, waxaanu lasoo noqday Philippe Coutinho oo amaah ugu maqnaa Bayern Munich iyo Pjanic oo Juventus ay kala soo saxeexdeen, halka ay oodda ka qaadeen xiddigo ay ka mid yihiin Ivan Rakitic oo ku biiray Sevilla iyo Arturo Vidal oo kusii jeeda Inter Milan.
Bartilmaameedka ugu weyn ee Barcelona ayaa ahaa weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez oo aanay kooxdiisu doonayn inay iibiso, waxaanay taasi keentay in Barca ay u jeedsato dhinaca weeraryahanka reer Netherlands ee Memphis Depay oo Lyon ay ku xidhay lacag dhan €25 milyan oo Euro.
Laakiin kooxda reer Spain ayaan awood u lahayn inay bixiso lacagtan oo marka loo eego Lautaro Martinez aad u hoosaysa, waxaanay u sheegeen Madaxweynaha Lyon in aanay haysanin wax lacag ah.
Jean-Michel Aulas oo ah madaxweynaha kooxda Lyon ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha Barcelona uu u sheegay Axaddii in ay haysano dhibaato dhaqaale oo aanay awoodi karayn inay lacagta Depay hadda bixiyaan, taasina ay siinayso fursad ay ku sii haystaan laacibkan hore ee Manchester United.
Aulas oo u warramayay wargeyska Veotball ee waddanka Netherlands kasoo baxaya ayaa yidhi: “Madaxweynaha Barca waxa uu Axaddii ii sheegay inay dhibaato badan oo dhaqaale haysato, sababtoo ah mushkiladdii KOOFID-19, mana awoodi doonaan inay sameeyaan dalabka Depay.”
Baazi Osman says:
Depay shaley ayaa lasoo wareegatey Barca, waana lahubaa warkaas, laakiin weli laguma dhawaaqin.